बधाई ! करोड क्लबमा प्रकाश सपुतको ‘कुरा बुझ्न पर्च’ – भिडियो
भाद्र ६, २०७८ १२:३५:५७ • ५९६ पटक पढिएको
चर्चित गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीत्र ‘कुरा बुझ्न पर्च’ युट्युब ट्रेन्डिङको निरन्तर शीर्ष स्थानमा रहँदै करोड क्लब प्रवेश गरेको छ। दुई साता अघि मात्रै सार्वजनिक उक्त गीतको भिडिओले शनिबारसम्म १ करोड ९९ हजार बढी ‘भ्युज’ बटुल्न सफल भएको छ ।
‘प्रकाश सपुत’ युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको १३ घण्टा भित्रै युट्युब ट्रेन्डिङ नम्बर एकमा आउन सफल भएको ‘कुरा बुझ्न पर्च’ सार्वजनिक भएको १५ दिनमै करोड क्लवमा पुग्ने पहिलो गीत बनेको छ ।
आइतबार बिहान यो समाचार तयार पार्दासम्म उक्त भिडिओ युट्युबको ट्रेन्डिङको एक नम्बरमा नै छ भने १ करोड २ लाख २ हजार बढी भ्यूज पाएको छ ।
गीतका सर्जक प्रकाश सपुतले भिडिओ सार्वजनिक भएको दुई सातामै निरन्तर युट्युब ट्रेन्डिङको नम्बर १ मा रहँदै करोड क्लबमा स्थान पाउनु सुखद अनुभूति भएको बताए।
– सार्वजनिक भएको १३ घण्टा भित्रै Trending #1 मा आउन सफल । – सार्वजनिक भएको २४ घण्टा भित्रै १० लाख भन्दा वढि भ्यूज पाउने । – सार्वजनिक भएको १५ दिनमै १ करोड पटक भन्दा वढि हेरिएको ! – निरन्तर trending #1 मै रहेर १ करोड भ्यूज पाउन सफल – एतिहासिक गित “कुरा बुझ्न पर्च “ ।
म यि लाईनहरु नोट गरेर बडो फुर्तिका साथ तपाईहरुलाई धन्यबाद सहितको खुसी व्यक्त गर्छु भनेर स्टाटस पोस्ट गर्नै लागेको थिए । एक जना मित्रले आजको नागरिक दैनिक मा दिजा जि ले लेख्नु भएको यो समीक्षात्मक लेख पठाउनु भयो । उस्तै उत्साह मा सरसर्ति पढे ।र अन्त्यमा म त्यो आफैले आफैलाई घोषणा गरेको एतिहासिक खुसी सेयर गर्न बाट खुम्चिए । कलाका दृष्टिकोणले यो गितमा केहि सुन्दर प्रयासहरु छन । केहि महिला मुद्दाहरुलाई हामीले सिरियस्ली सम्बोधन गर्न खोजेका छौ । तर रमाईलो तरिकाले फ़िल्मांकन गर्दा सतहि मात्रै लागेको पनि होला । किनकि यो ८-१० मिनेटको गित हो । सबै अटाउन सकिदैन । लेखक दिजा जि स्वयमले पनि स्विकार्नु भएको छ – “हुन त एउटा गीतमा सबै मुद्दा उठाउन वा समेट्न सकिँदैन तर उठाइएको विषय जायज हुनुपर्छ भन्ने कुरा अहम् हो !।
“ दिजा ज़िले गित सुन्दै भिडियो हेर्दै प्वाईन्ट आउट गर्नु भएका सप्पै विषयहरु गम्भिर छन । कलाका दृष्टिकोण ले केहि तर्कहरु राख्न सकिन्छ तर म आफ्नो प्रयास मा भएका सबै कमजोरीहरु स्विकार गर्छु र सच्चिने प्रयत्न पनि गर्ने छु तर कम्तिमा यहा उठेका विषयहरु गम्भिर हुन, यसमाथी सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ, वहस हुन जरुरी छ, सम्बोधन हुन जरुरी छ , परिवर्तन हुन जरुरी भन्ने कुरा एउटा गित र भिडियो मार्फत वा भनौ कला मार्फत भन्न सकेको र त्यो धेरै जनामा पुर्याउन सकेकोमा हाम्रो टिम दंग छौ । विषय बुझ्ने दिजा जी हरु र कला बुझ्ने तपाईहरु सबै लाई धन्यबाद । शुभरात्री